दक्षिण कोरियाले घर फर्कन लागेका ९० हजार विदेशीको ३ महिना भिषा थपिदिने ! – Korea Pati
July 19, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियाले घर फर्कन लागेका ९० हजार विदेशीको ३ महिना भिषा थपिदिने !
दक्षिण कोरियाले यहाँ बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिक जसको भिजा अवधि स’किन लागेको छ उनिहरुको भिजा अरु ३ महिना थपिदिने भएको छ।
कोरियाको न्या’य मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार यहाँ बै’धा’निक रुपमा बसोबास गरीरहेका बिदेशी नागरिक तथा विदेशी कोरियन (F-4) हरुको भिजा थपिदिन लागको हो। यसले करिब ९० हजार विदेशी लाभान्वित हुनेछन।
को’रो’ना भा’इ’रस थप फै’लन नदिन विदेशीहरुको आवत’जावत क’म गर्ने उदेश्यले कोरिया सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो। केहि समयदेखि कोरियामा को’रो’ना फै’लि’एसँगै सामाजिक दूरीका नि’य’महरुलाई यहाँ क’डा बनाइएको छ।
कोरियामा रहेका विदेशी नागरिक जसको भिजा अवधि सकिन लागेको छ उनिहरु यदि भिजा नथप्ने हो भने आफ्नो देश अ’निवार्य रुपमा फर्कनुपर्ने हुन्छ जसले भि’डभा’ड ब’ढाउँदछ। त्यसैले सरकारले भि’डभा’ड कम होस भने यसो गरिएको बुझीएको छ।
दक्षिण कोरियामा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरुमध्ये जुलाई १९ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म भिजा सकिनेहरु करिब ९० हजारको संख्यामा रहेका छन। यिनिहरु सबैलाई कोरियन सरकारले थप ३ महिनाको भि’जा थपिदिने भएको हो। थपिने भि’जा उनिहरुको भि’जा अबधि स’किने मितिबाट ९० दिन थप हुनेछ।
तर यो नियमबाट अ’द’क्ष कामदार भिजा (E-9), पानिजहाज क्रू (E-10), काम र भिजिट (H-2) तथा अन्य जि-१ भिजामा रहेका विदेशी नागरिकका हकमा भने ला’गू हुनेछैन। उनिहरुलाई यो नि’यमले भिजा थप्न मिल्ने का’नू’नी अ’धिकार प्रदान नगर्ने हुँदा उनिहरुको हकमा यस अघिकै व्य’वस्था ला’गू हुने बताइएको छ।
August 13, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने